पोखरामा “ईन्जोय जोन”,२४ सै घण्टा खुल्ला, जहाँ प्रहरी हस्तक्षेप नहुने
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रेडलाइट एरियाको बहस सुरु गरेपछि निकै आलोचना भयो । भदौ २६ गते गुरुङले रेडलाइट एसिया तोकिनुपर्ने र यौन पेशालाई व्यवस्थित गर्न यौनकर्मीलाई परिचयपत्र व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेकान थिए । यो समाचार आजको अनलाईन खबरमा लेखिएको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र अर्थात इन्जोय जोन बनाउने योजना बनाएको छ । इन्जोय जोनलाई धेरैले ‘रेडलाइट यरिया’ कै विकसित रुप भनेका छन् । तर, मन्त्रालयले रेडलाइट यरिया र इन्जोय जोन फरक भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘इन्जोय जोनलाई गलत अर्थमा अथ्र्याएर प्रदेशको बदनाम गर्न खोजिँदैछ ।
पोखराको पामे क्षेत्रमा इन्जोय जोन बनाइने मन्त्री लम्सालले बताए । उनले पर्यटकले हिमाल र ताललाई एकैचोटी दृश्यवलोकन गर्दै मनोरञ्जन गर्न पाउने उपयुक्त ठाउँ खोजिरहेको बताए ।
‘तोकिएको यरियामा उनीहरुले खाने, बस्ने, सुत्ने, पार्टी गर्नेलगायत ‘अन्य मनोरञ्जन’ पनि गर्न पाउँछन् । त्यहाँ कसैले डिस्टर्ब गर्दैन,’ उनले भने । अन्य मनोरञ्जनमा कानुनले वर्जित गरेका बाहेक पर्यटकले आफूले चाहेको कुनै पनि प्रकारको मनोरञ्जन गर्न पाउने उनको भनाइ थियो ।
इन्जोय जोन योजनाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी छ । इन्जोय क्षेत्रमा खाना, खाजा, खेल्ने, रमाउने, स्विमिङ, क्यासिनोदेपख ज्याकोजीसम्म हुने उनले बताए । यस योजनाका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र डीपीआर तयार गर्न ९ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
इन्जोय जोन २४ सै घण्टा खुल्ने भएकाले त्यहाँ प्रहरी हस्तक्षेप नहुने तर सुरक्षाको जिम्मवारी प्रदेश सरकारले लिने उनले प्रष्ट्याए । ‘प्रदेशले २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही योजनालाई पूरा गर्न हामीले यो योजना ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटन उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’
(पहिले भएको रेडलाईट एरियाको बहस सम्बन्धी समाचार तल भिडियो हेर्नुहोस) डिसि नेपाल डट कम सङ भएको कुराकानी
मजाक हैन, पोखरामा साँच्चिकै रेडलाइट एरिया तोकिन्छः मुख्यमन्त्री गुरुङ [भिडियो संवाद]
मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश
हाम्रो समाज असाध्यै ढोङ्गी छ। मानिस भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाइ रहन्छ। तर उ सबैभन्दा सादगी हुँ भनेर अभियन गर्ने हाम्रो समाज हो। र, त्यसलाई फेरि सम्मान हाम्रै समाजले गर्छ। हाम्रो समाजमा यतिधेरै पारिवारिक विखण्ड भएको छ, जस्तै श्रीमान बाहिर भयो भने श्रीमतीले यहाँ व्यभिचार गर्ने, श्रीमती बाहिर छन् भने श्रीमानले यहाँ व्यभिचार गर्ने। उही चाँहि सदाचारी हुने ।
मैले वेश्वृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न एउटा कानुन निर्माण गरौँ भन्दा चाँहि के नराम्रो भो । कतिले मलाई यो मुख्यमन्त्रीले त समाजमा विखण्डन ल्याउने कुरा गर्यो पनि भने । मेरो मान्यता छ कि यो सबै ढोङ्गी कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो समाजमा देखिएको व्यभिचारलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौ । मैले के मात्र भनेको हो भने यो विषयमा अब छलफल गरौँ, बहस गरौँ । यस विषयमा निर्णय गरेको पनि होइन।
पोखरामा र नेपालभरि नै यो वेश्यावृत्ति जुन ढङ्गले भइरहेको छ र यसले समाजमा जुन प्रकारको विकृति ल्याइरहेको छ, त्यसको अन्त्य गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा मैले गरेको हो । त्यसका लागि रेड लाइट एरिया तोक्नु उचित हुन्छ ।
रेडलाइट एरिया खोल्दा ठिक कि बेठिक भनेर छलफल चलाउने बेला भयो भनेको हो मैले। जसरी यौन व्यवसाय चलिरहेको छ र यौनकर्मीहरु छन्, उनीहरुले पनि सास्ती खेपिरहेका छन्। उनीहरुको कमाइको आधा त प्रशासन र सुरक्षा निकायका मानिसहरुले खान्छन् होला। च्याप्प समायो लग्यो। रङ्गेहात समात्यौं भन्यो पैसा खायो ।
होटलवालाको पनि बेइज्जती, त्यहाँ काम गर्नेको पनि बेइज्जती, पक्राउ पर्ने पुरुषको पनि बेइज्जती, महिलाको पनि बेइज्जती। त्यस्तै पर्यो भने अर्काकी श्रीमती परिरहेकी हुन्छिन्। त्यसपछि घर परिवार सबै विखण्डन हुने भयो। अनि जत्ति भन्यो त्यत्ति पैसा दिएर उनीहरु निस्किन्छन्। यो अहिले दैनिकजसो भइरहेकै कुरा हो ।
यस्तो विकृति भइराख्नु भन्दा यसलाई व्यवस्थित गरौं भनेको हो मैले। यो सबै ढोङ छोडौं र यसलाई व्यवस्थित गरौं। र, सभ्य समाजतिर लागौं भनेको हो मैले। त्यसकारण यो विषयमा छलफल गरौं।
चीनमा आजभन्दा करिव २० वर्ष अगाडि मिडियाहरुले यो विषयमा अभियान सुरु गर्यो। चीन जस्तो समाजवादी मुलुकमा, कम्युनिष्ट प्रशासन भएको मुलुकमा रेड लाइट एरिया राख्ने विषयमा ठिक कि बेठिक भनेर लामो छलफल चल्यो। लामो छलफलपछि अब यो मुलुकमा रेड लाइट एरिया चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
थाइल्याण्डको त केही वर्ष अगाडिसम्म ३० प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानी सेक्स टुरिज्मबाट हुन्थ्यो। त्यसलाई उसले व्यवस्थित गर्यो। अहिले थाइल्याण्डको समाज राम्रो की हाम्रो समाज राम्रो ? कुहिएर बस्ने हाम्रो जस्तो समाज राम्रो कि घाउ खटिरा भयो भने चाँडै मलमपट्टी लगाएर रोग निको बनाउने समाज राम्रो? यसकारण यो विषयमा अब छलफल चलाउँ भनेको हो मैले।
यो विषय अरुले भन्न सकेका थिएनन् मैले कुरा खोलिदिएको हो। मैले विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेपछि अनलाइनहरुमा खबर आयो। करिब ७० प्रतिशतले यो एकदम राम्रो विचार हो, अब यसैगरी जानुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्। अर्को थरीले अब मुख्यमन्त्रीको काम रहेनछ, अब वेश्यालय खोल्ने, आनन्दले बस्ने होला भनेर पनि कमेन्ट आइरहको छ। यस्ता मानिस त समाजमा भइहाल्छन्।
त्यसकारण अहिलेको जमानामा यदि समाजलाई सभ्य बनाउने हो रेडलाइट चाहिन्छ । भने यो चीज अरुले भन्न सकेनन् मैले मात्रै भनेको हो। यहाँका व्यवसायीहरुपनि यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। यसलाई व्यवस्थित गरौं भन्ने उहाँहरुको पनि सुझाव छ।
रेड लाइट खोल्ने विषयमा हामी अहिले नै कानुन बनाइ हाल्दैनौं। पहिलो यो छलफल हुन्छ। दुई चार वर्षै पनि लाग्ला। केहीदिन पहिले मैले यो विषय जहाँ उठान् गरेँ, त्यसपछि धेरैले हैन यो मुख्यमन्त्रीले त भनि पो हाल्यो गाँडे पनि भने। तर एकछिन पछि खाना खाने बेलामा कसैले भन्न सकेका थिएनन् तापाँइले ठिक भन्नु भो भन्दै थिए। सबैलाई चाहिएको कुरा यही छ। तपाइँले मुख खोल्नु भयो अब यो विषयको छलफल सुरु हुन्छ भने। छलफल चल्दै जाँदा केही वर्षपछि यसको आवश्यकता महशुस गरिन्छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलनमा कोपनहेगन हामी एक हप्ताको कार्यक्रमकालागि गएका थियौं। एक दिन हामीलाई फुर्सद भयो। साथीहरुले यहाँ हिप्पीहरुको गाउँ छ भन्ने सुनाए। अनि हामी हिप्पी गाउँमा गयौं। त्यहाँ जाँदा त दिउँसै गाँजा खाएर राता राता आँखा पारेर सडक सडकमा बसिरहेका मानिसहरु देखिए । रेस्टुरेन्टमा पस्यो भने पनि त्यस्तै मात्र मान्छे छन्। सबै राता राता आँखाले हामीलाकई हेरिरहेका छन्।
त्यो सिमानाभित्र उनीहरुको छुट्टै राज छ। उनीहरुले समाजमा कसैलाई केही बिगारेकै छैनन्। नियन्त्रित र व्यवस्थित छ त्यो। तर सबै सभ्य समाज बसेको ठाउँमा दुई जना हिप्पी बसेर गाँजा खाइदियो भने के हुन्छ समाजमा ? त्यही भएर त्यसलाई निश्चित ठाउँमा लगेर थन्क्याइयो। मैले पनि त्यही भनेको हो। त्यो हिप्पीको गाउँले गर्दा डेनमार्क सबै भन्दा गन्हाएको ठाउँ भएको छ की संसारको विकसित र सभ्य मुलुक छ डेनमार्क, नर्वे स्वीडेनहरु?
अहिलेसम्म म रेड लाइट एरियामा गएको छैन। तर, अब अध्ययनकालागि जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । अब भारतमा हाम्रा नेपाली चेली कति बेचिन्छन् होला? कतिपय त उतै गएर एचआईभी लागेर उतै मरेका पनि छन्। एक दुई जनाले मात्रै हिम्मत गरेर विद्रोह गरेर फर्किएका छन्। यस्ता विषयलाई अन्त्य गर्ने हो भने यस्ता चीजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसकारण रेडलाइट एरिया कसरी व्यवस्थित गरेको रहेछ भनेर हामीले हेर्न जानुपर्ने हुन सक्छ।
रेड लाइट एरिया भएन भने त्यसको प्रस्फुटन कहाँ हुन्छ? ८० वर्षको बुढी आमामाथि आक्रमण गर्ने, तीन चार वर्षको बच्चामाथिसमेत बलात्कारका घटना बढ्दै छन् । यस्ता चीजलाई म्यानेज गर्ने कुरा त चाहियो नी। जब कानुनी रुपमा चलेका वेश्यालय हुन्छन् भने त्यँही जान्छ नी मानिस। मैले यस्ता कुरा बोल्दाखेरी कस्तो मानिस होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो।
यो मात्रै होइन मैले त क्यासिनो खोल्नुपर्छ पनि भनेको छु। हाम्रो नेपाली समाजमा जुवाडेलाई अपहेलित छन्। जुवाले समाज नै प्रभाव पारेको छ, जस्तो जुवाले पाँच पाण्डवको वनबास नै भएको हो। हामी त्यही पाण्डवको कथाबाट मात्रै दिक्षित छौं । तर अहिले जुवाको परिभाषा फेरिएको छ ।
आजको जुवा त नियम कानुनले बाँधेको हुन्छ। व्यवस्थित गरेको हुन्छ। एकथरी मानिसले प्रयाप्त सम्पत्ति कमाएको हुन्छ। उनीहरुलाई त्यो पैसा कहाँ खर्च गरौं भन्ने भइरहेको हुन्छ। कसरी मनोरञ्जन गरौं भन्ने हुन्छ। त्यस्ता करोडपछि, अबरपति र खर्बपतिलाई पोखराजस्तो ठाउँमा रमाइलो डाँडामा क्यासिनो खोल्यो भने हामीले त पैसा पो कमाउन सक्छौं त। एउटा अमेरिकाको अबरपतिलाई क्यासिनो खेलेर यहाँ उसलाई राख्दा हाम्रो समाजलाई के नोक्सानी हुन्छ?
हामीले त त्यो क्यासिनोबाट रोजगारी पाएका हुन्छौं, त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका हुन्छौं। त्यो क्यासिनाले नेपाल सरकालाई रोयल्टी तिरेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति यहाँ आएपछि त्यसले तास मात्रै खेल्दैन होला, खान्छ होला, पिउँछ होला, सुत्छ होला। त्यसबापत हामीले फाइदा लिन्छौं। यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रो समृद्धितिर जोड्नुपर्छ। क्यासिनोमा नेपाललाई जान नदिने हो। अनि विदेशको पैसा यहाँ ल्याउने कुरा, विदेशीको कहाँ फालौं कहाँ फालौं भन्ने पैसा नियम संगत ढंगले लिँदा बुद्धिमानी हुन्छ की पाँच पाण्डवको वनबास भयो यसलाई बन्द गरौं भनेर बस्ने ?
धन कमाउने लालसा धेरै छ मेरो। आफ्नो प्रदेशको आम्दामी बढाउनु छ मलाई। आफ्नो प्रदेशको आम्दानी नबढाइकन मेरो प्रदेशको जनतालाई म कसरी स्वास्थ्यको सुविधा दिन सक्छु, कसरी शिक्षाको सुविधा दिन सक्छु।
धन कमाउने भनेको जुवा खेलाएर मात्रै होइन, खाली यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर मात्र भनेको हो। हामीले धन कमाउन विजुली उत्पादन गर्ने भनेका छौं, खानी उत्खनन् गर्ने भनेका छौं। राजनीतिक भाषमा भन्दा स्रोतको परिचालन गर्ने, पूँजीको निर्माण गर्ने भन्छौं । जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा सरकारले पनि पैसा कमाउनु पर्यो। राज्यको ढुकुटी ठूलो बनाउनुपर्यो। सरकार धनी हुने हो भने त यहाँ पर्यटनको विकास गर्नुपर्यो।
पहिला अर्काको भाँडा माझेर के बस्ने भन्ने हुन्थ्यो । अहिले के भयो भने अर्काको भाँडा माझेर बस्यो भने हाम्रो इज्जत जान्छ भन्नेका सबै छोरा नाति विदेशमा गएर भाँडा माझेर बसोक छन्। र, उनीहरुले आफ्नो भौतिक जीवन सुखमय तरिकाले व्यतित गरेका छन्। यसरी हेर्दा भाँडा माझ्ने कुरा अपमानित गर्ने त होइन रहेछ त!
यो रोचक भिडियो संवाद हेर्नुहोस्ः